Onlinesaptarngi – NO 1 NEWSPORTAL IN TOWN
June 13, 2021 भारतीय सीमामा तारबार लगाउन प्रदेश सांसदको माग
June 13, 2021 कोरोना खोप नपाउँदा लक्षित वर्ग मारमा
June 13, 2021 उपत्यकामा लम्बियो निषेधाज्ञा, के के गर्न पाइन्छ?(सूचनासहित)
June 13, 2021 देशकै ठूलो मानवनिर्मित तालमा सुरक्षा निकायको विपद् प्रतिकार्य अभ्यास
June 13, 2021 युरोकपमा आज पनि तीन खेल : साँझ ६:४५ मा इंग्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै
June 13, 2021 कोपा अमेरिकाको उद्घाटन खेलमा ब्राजिल र भेनेजुएला भिड्दै
उपत्यकामा लम्बियो निषेधाज्ञा, के के गर्न पाइन्छ?(सूचनासहित)
युरोकपमा आज पनि तीन खेल : साँझ ६:४५ मा इंग्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै
सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकास्थित देशकै सबैभन्दा ठूलो मानवनिर्मित भरत तालमा तिन वटै सुरक्षा निकायबाट प्रतिकार्य पूर्वतयारी अभ्यास गरिएको छ। कूल ४५ फिट गहिराई रहेको सो पोखरी एक सय २१ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको छ। यस वर्ष जल तथा मौसम विभाग पूर्वानुमान महाशाखाले भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेकोले त्यसको प्रतिकार्यको अभ्यास भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीका प्रहरी […]
३० जेठ, काठमाडौं । युरोकप २०२० अन्तर्गत आज पनि तीन खेल हुँदैछन् । जसमा समूह सी को दुई र समूह डी को एक खेल हुनेछ । समूह डी मा रहेका इंग्ल्याण्ड र क्रोएसियाबीच खेल नेपाली सयम अनुसार साँझ ६:४५ बजे सुरु हुनेछ । खेल लण्डनस्थित वेम्वली मैदानमा हुनेछ । सधैँ उपाधि दाबेदार भएर पनि अहिलेसम्म […]
३० जेठ, काठमाडौं । मिनी विश्वकप मानिने युरोकप सुरु भएको दुई दिनपछि विश्वकै सबैभन्दा पुरानो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका सोमबारदेखि ब्राजलिमा सुरु हुँदैछ । ४७ औं संस्करणको कोपा अमेरिका यसअघि कोलम्बिया र अर्जेन्टिनामा हुने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर आयोजकको भूमिका ब्राजिलले पाएको हो । कोलम्बियामा विरोध प्रदर्शन भएपछि अर्जेन्टिनाले एकल रुपमा प्रतियोगिता गर्ने तयारी […]
‘द फेमिली म्यान ३’का लागि मनोजले मागे २० करोड पारिश्रमिक
वेव सिरिज ‘द फेमिली म्यान २’ जुन ४ तारिखमा रिलिज भैसकेको छ । यो सिरिजलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । यो सिरिजको मुख्य भूमिकामा कलाकार मनोज वाजपेयीले काम गरेका छन् । वेव सिरिजको दोश्रो श्रृङ्खलामा पनि मनोजको कामलाई दर्शकले तारिफ गरिरहेका छन् । मनोजले सिरिजको दोश्रो श्रृङ्खलाका लागि ८ देखि १० करोड पारिश्रमिक वुझेको भारतीय […]
३० जेठ, तनहुँ । निषेधाज्ञाका बेला जिल्लाका पर्यटकीयस्थल यतिबेला सुनसान छ । तर म्याग्दे गाउँपालिका-२ स्थित ज्यानटाङ सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको रूखमाथि बनेको घरले भने सर्वसाधारण आकर्षित गरेको छ । निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि सर्वसाधारण यस स्थानमा पुगिरहेका छन् । दैनिक १५-२० सर्वसाधारण यस ठाउँमा पुगिरहेका छन् । रूखमाथि बनेको घर जिल्लाकै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य हो […]
काठमाडौंमै भेटियो महामारी विरुद्ध खोप लगाएकी संगिताको शरीरमा पनि चम्चा थाल टाँसिन थाले, डाक्टरै चकित
अहिले विश्वमै कोरोना महामारी विरुद्ध खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ । नेपालमा पनि भाइरस विरुद्धको खोप अभियान जारी छ । खोप लगाएपछि कसैलाई ज्वरो आउने, कसैलाई शरीर दुख्ने त कसैलाई कमजोरी महसुस हुने सुनिँदै आएको छ । तर केही समयअघि भारतका एक व्यक्तिको शरीर खोप लगाएपछि चुम्बक बनेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा पनि […]
आफ्नै युटुबमा च्यानलमा मस्त सलिनमान
नेपाली चलचित्रमा छोटो समयमा नै दर्शकको मनमा बस्न सफल नायक हुन् सलिनमान बनियाँ । सलिमानले चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’बाट करिअर सुरु गरेका हुन् । यो चलचित्रले हिट भएपछि सलिमानको माग पनि चुलियो । तर, सलिमान भने चलचित्र रोजाइमा चुजी देखिए । उनले, दोश्रो चलचित्र ‘यात्रा’मा काम गर्न समय लगाए । यो चलचित्रमा उनी भ्लगरको […]
काठमाडौं । तपाईंले बिल गेट्सलाई माइक्रोसफ्टका संस्थापक र एक विश्व धनाढ्यको रुपमा त चिन्नुभएकै होला । सँगसँगै उनी अमेरिकाका सबैभन्दा ठूला किसान समेत हुन्भ न्दा चाहिँ तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ । म्याकडोनाल्डको फ्रेन्च फ्राइजका लागि प्रयोग हुने आलु बिल गेट्सकै खेतबाट आउने गर्दछ । बिल गेट्स र उनी पूर्वपत्नी मेलिन्डा गेट्सको साथमा २६९,००० एकड जमिन […]
काठमाडाैं । गत वर्ष एप्पलले आफ्ना प्रयाेगकर्तालाई गरेकाे वाचा यस वर्षकाे वर्ल्ड वाइड डेभलपर कन्फ्रेन्समार्फत पुरा गरेकाे छ । कन्फ्रेन्सकाे “मुभ बियाेन्ड पासवर्डस्” सेसनमार्फत एप्पलले कुनै पासवर्ड बिना नै वेबसाइट अथवा एपमा साइन अप गर्न सकिने फेस आईडी र टच आईडी प्रविधि सार्वजनिक गरेकाे हाे । ‘पासकिज’ नाम दिइएकाे याे प्रविधिमार्फत प्रयाेगकर्ताले कुनै वेबसाइटमा साइन […]
काठमाडाैं । एप्पलले हालै मात्र डब्लूडब्लूडीसी २०२१ मार्फत नयाँ आईओएस अपडेट सार्वजनिक गरेको छ । यो अपडेटसँगै आईफोनमा निकै ठूलो परिवर्तन देखिनेछ । यसपटक एप्पलले नोटिफिकेसनलाई व्यवस्थित गर्दै प्राइभेसी तथा पर्सनलाइजेसनमा निकै ध्यान दिएको छ । त्यसो त यसले अघिल्लो अपरेटिङ सिस्टम आईओएस १४ जति ठूलो बदलाव ल्याएको छैन । तर प्रयोगकर्ताका लागि भने धेरै […]
Site Developed by : Gadget Dai! Powered by WordPress | Bootstrap Themes